Izingxenye ezishibhile ze-OEM zensimbi zensimbi ze-CNC zezingxenye zemishini yefektri nabaphakeli | I-Ouzhan
Izingxenye eziyinhloko zensimbi engagqwali yi-carbon, i-chromium, i-nickel, nezinye izinto ze-alloy ezifana ne-molybdenum, ithusi ne-nitrogen. Into eyinhloko yokuhlanganisa insimbi engagqwali yi-Cr (chromium), futhi kuphela lapho okuqukethwe kwe-Cr kufinyelela inani elithile, insimbi inokumelana nokugqwala.
Kwenziwe ngentando engagqwali yokugaya imishini izesekeli
Insimbi engenasici inezici ezinhle kakhulu ezinjengamandla ayingqayizivele, ukumelana nokugqoka okuphezulu, ukumelana nokugqwala okuphakeme nokumelana nokugqwala. Ngakho-ke, isetshenziswa kabanzi embonini, imishini yokudla, umkhakha we-electromechanical, umkhakha wezinto zasendlini nomhlobiso wasekhaya, umkhakha wokuqeda. Ukugaya kuyindlela yokwenza imishini lapho umshini wokugaya usetshenziswa njengethuluzi lokuphrinta ubuso bento. Imishini yokugaya ifaka imishini yokugaya evundlile, imishini yokugaya mpo, imishini yokugaya ingosi, imishini yokugaya, imishini yokugaya yendawo yonke, nemishini yokugaya ibha. I-Ouzhan inikezela ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso zomshini wezinsimbi ezingagqwali ezisikiwe zamakhasimende anenani.
Izinzuzo Shanghai Ouzhan insimbi engagqwali izingxenye egayiwe:
Izingxenye zokugaya izinsimbi zensimbi ezingenasici ezenziwe ngokwezifiso
Ukwelashwa komhlaba Ukwelashwa ebusweni bethusi kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nezidingo zakho, ezifana electroplating inqubo, inqubo enamathela ngegolide, inqubo umbhalo, wokucwebezelisa electrolytic
Langaphambilini Kwenziwe ngentando engagqwali milling izingxenye kucutshungulwa izingxenye imishini
Olandelayo: Izingxenye ze-CNC zensimbi zensimbi zensimbi